Zekaraya 12 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jehova ga-echebe Juda na Jeruselem (1-9)
Jeruselem bụ “nkume dị arọ” (3)
A ga-ebere onye a mara ube ákwá arịrị (10-14)
12 Ihe Chineke kpebiri ime: “Okwu Jehova kwuru banyere Izrel.” Ihe a bụ ihe Jehova kwuru,Onye gbasara eluigwe,+Onye tọrọ ntọala ụwa,+Onye nyekwara mmadụ ume ndụ.* 2 “Lee, ana m eme ka Jeruselem bụrụ iko* nke na-eme ka ndị niile gbara ya gburugburu ṅagharịa. Ndị iro ga-anọchibido Juda, nọchibidokwa Jeruselem.+ 3 N’ụbọchị ahụ, m ga-eme ka Jeruselem bụrụ nkume nke ga-anyị ndị niile arọ. Ndị niile gbalịrị ka ha bulie ya ga-emerụ ezigbo ahụ́.+ Mba niile dị n’ụwa ga-ezukọta ka ha megide ya.”+ 4 Jehova kwuru, sị, “N’ụbọchị ahụ, m ga-eme ka ịnyịnya ọ bụla tụọ ụjọ, meekwa ka ara gbaa onye na-agba ya. Anya m ga-adị n’ụlọ Juda, ma m ga-eme ka ịnyịnya niile nke ndị dị iche iche kpuo ìsì. 5 Ndị isi Juda ga-ekwu n’obi ha, sị, ‘Ndị bi na Jeruselem bụ ike anyị n’ihi na Jehova nke ụsụụ ndị agha bụ Chineke ha.’+ 6 N’ụbọchị ahụ, m ga-eme ka ndị isi Juda dị ka ite na-ere ọkụ n’ọhịa, meekwa ka ha dị ka ọwa ọkụ e sonyere n’ùkwù ọka.*+ Ha ga-erepịa ndị niile gbara ha gburugburu n’aka nri nakwa n’aka ekpe.+ Ndị Jeruselem ga-ebikwa n’obodo ha,* ya bụ, na Jeruselem.+ 7 “Jehova ga-ebukwa ụzọ zọpụta ụlọikwuu ndị dị na Juda, ka ebube* ụlọ Devid na ebube* nke ndị bi na Jeruselem ghara ịkarị nke Juda. 8 N’ụbọchị ahụ, Jehova ga-echebe ndị bi na Jeruselem.+ N’ụbọchị ahụ, onye ọ bụla n’ime ha nke na-ada ada* ga-adị ka Devid. Ụlọ Devid ga-adịkwa ka chi. Ọ ga-adị ka mmụọ ozi Jehova nke na-ebutere ha ụzọ.+ 9 N’ụbọchị ahụ, m ga-ebibirịrị mba niile na-alụso Jeruselem agha.+ 10 “M ga-awụsa ụlọ Devid na ndị bi na Jeruselem mmụọ amara na nke arịrịọ. Ha ga-elegide onye ha mara ube anya,+ ha ga-ebekwara ya ákwá arịrị otú a na-ebe ma nwa nwoke a mụrụ naanị ya nwụọ. Ha ga-eruru ya uju otú a na-eru ma ọkpara nwụọ. 11 N’ụbọchị ahụ, ákwá arịrị a ga-ebe na Jeruselem ga-adị ukwuu. Ọ ga-adị ka ákwá arịrị e bere na Hedadrimọn nke dị na Ndagwurugwu Megido.+ 12 Ala ahụ ga-ebe ákwá arịrị. Ezinụlọ ọ bụla ga-ebe nke ya naanị ya. Ezinụlọ Devid ga-ebe nke ya naanị ya, ụmụ nwaanyị ya ga-ebekwa nke ha naanị ha. Ezinụlọ Netan+ ga-ebe nke ya naanị ya, ụmụ nwaanyị ya ga-ebekwa nke ha naanị ha. 13 Ezinụlọ Livaị+ ga-ebe nke ya naanị ya, ụmụ nwaanyị ya ga-ebekwa nke ha naanị ha. Ezinụlọ Shimiaị+ ga-ebe nke ya naanị ya, ụmụ nwaanyị ya ga-ebekwa nke ha naanị ha, 14 nakwa ezinụlọ niile fọdụrụnụ. Ezinụlọ ọ bụla ga-ebe nke ya naanị ya, ụmụ nwaanyị ha ga-ebekwa nke ha naanị ha.
^ Ma ọ bụ “efere.”
^ Ma ọ bụ “n’ebe ha kwesịrị ibi.”
^ Ma ọ bụ “ịma mma.”
^ Ma ọ bụ “nke ike na-adịtụdịghị.”